एकै घरका दाजु बहिनीको एकै दिन मृत्यु ! – Nayabook
एकै घरका दाजु बहिनीको एकै दिन मृत्यु !
इटहरी- इटहरीका एकै घरका दाजु बहिनीको एकै दिन मृत्यु भएको छ । इटहरी २० तरहरा तामाङ टोलका एक राजेन राई र बहिनी दिपा राईको एकै दिन मृत्यु भएको हो ।
राजेन केहि समय देखि विरामी थिए । उनी काठमाण्डौमा स्कुल चलाएर बसेका थिए । उनी जण्डिसको विरामी थिए । दिपाको भने पित्तथैलीको पथ्थरिया भए पछि धरान स्थित विजयपुर अस्पतालमा पथ्थरियाको अप्रेशन गर्न लगिएको थियो । तर उनि बाँच्न सकिनन् ।
डाक्टरको गम्भिर लापरवाहीको कारण मृत्यु भएको भन्दै छानविन गर्न आफन्तहरुले माग गरेका छन ।
धरान विजयपुर अस्पतालको गम्भिर लापरवाही गरेर पथ्थरियाको अप्रेशन गर्दा दिपाको ज्यानगएको भन्दै आफन्तहरुले आपत्ती जनाएका छन । अस्पतालाई कडा कारवाही हुनु पर्ने तरहराबासीको माग छ । दाजु बहिनीकै एकै दिन मृत्यु भए पछि आफन्त मात्र नभइ पुरा गाँउन नै विछिप्त बनेको छ। पुर्वेली न्युजले खबर छापेको छ ।
यो पनि – आफु भन्दा २५ बर्ष जेठा शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ इतिहाँस, सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ !